Azuqua: Tirtir Miisaankaaga oo Ku Xidho Codsiyada Cloud iyo SaaS | Martech Zone
Kate Legett, VP iyo falanqeeyaha guud ee Forrester bishii Sebtember 2015 boostada ayaa ku qortay boosteeda, CRM waa Jajab. Waa Mawduuc Muran Ka Taagan Yahay:
Ka dhig khibradda macaamiisha hore iyo xarunta shirkaddaada. Hubso inaad ku taageerayso macaamiishaada dhammaadkooda si ay u soo afjaraan safarka si sahlan, wax ku ool ah, ka-qaybgal xiiso leh, xitaa marka safarka macaamilku ka gudbo tiknoolajiyada tiknoolajiyada.
Kala-jajabnaanta CRM waxay abuurtaa xanuun u jahawareersan khibradda macaamiisha. Warbixin daruur 2015 Netskope waxay sheegaysaa in celceliska shirkaddu uu adeegsado in ka badan 100 codsi suuq-geynta iyo CRM. In kasta oo barnaamijyada SaaS ay wadaan wax-ku-oolnimo weyn, waxay sidoo kale u abuuraan dhibaatooyin macaamiisha ganacsiga - sida isku-darka iyo falanqaynta xogta macaamiisha. Tusaale ahaan, eConsultancy heley taas wareejinta xogta udhaxeysa nidaamyada (74%) ayaa kamid ah caqabadaha ugu xanuunka badan suuqgeynta, iyo Bluewolf ayaa helay taas 70% isticmaalayaasha Salesforce waa inay galaan xog isku mid ah nidaamyo badan.
Azuqua waxay ka caawineysaa ganacsiyada xallinta 'xanuunka barnaamijyadooda' adoo awood siinaya dadka isticmaala ganacsiyada inay ku xirmaan daruuraha iyo codsiyada SaaS wax ka yar hal daqiiqo, oo ay ku jiraan xal cusub oo loo yaqaan Azuqua ee Guusha Macaamiisha. Azuqua oo loogu talagalay in lagu baabi'iyo aaladaha ay abuureen kala-goynta CRM, otomaatiga suuq-geynta, adeegga iyo codsiyada taageerada, Azuqua ee loogu talagalay Guusha Macaamiil waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala ganacsiyada inay dhexgalaan xogta, si otomaatig ah u socodsiiyaan shaqooyinka muhiimka u ah ganacsiga ayna la wareegaan khibradda macaamiisha. Azuqua ee Guusha Macaamiisha waxaa la heli karaa laga bilaabo $ 250 bishiiba.
Azuqua ee Guusha Macaamiilku waxay heshaa CRM-keena, taageerada iyo barnaamijyada maareynta mashruuca ee wada shaqeynaya si loo baabi'iyo gelitaanka xogta gacanta. Iyadoo la adeegsanayo automated socodka socodka, iibkeena, taageeradayada iyo kooxaha guuleysta macaamiisha ayaa wada shaqeyn kara si loo abuuro khibrad macmiil sare Thomas Enochs, VP ee Guusha Macaamiisha ee kuugga
Azuqua ee loogu talagalay Guusha Macaamiisha waxay ka kooban tahay in ka badan 40 isku-darka arjiga, oo ay ku jiraan FullContact, Gainsight, Marketo, Salesforce, Workfront iyo Zendesk, iyo 15 shaqooyin ujeeddo leh oo loo dhisay. Marxalad kasta oo safarka macaamiisha ah, Azuqua waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala ganacsiyada inay ku xirmaan barnaamijyadooda SaaS, si otomaatig ah u socodsiiyaan shaqooyinka muhiimka u ah ganacsiga, iyo inay la wareegaan khibradda macaamiisha.
Mashiinka guuleysta macaamiisha sifiican u saliida leh wuxuu u baahan yahay in barnaamijyadaadu ay ka shaqeeyaan tandem si loo helo xog isdaba joog ah oo isla markaaba loo qaybiyo dhammaan macmiisha suurtogalka ah ee taabashada. Ahmiyada iyo mudnaanta waqtiga, marka marka barnaamijyada lakala jaray ay soo duraan dib u dhac iyo khaladaad, taas oo u tarjumeysa dakhli lumay. Xalkeenu wuxuu yareynayaa xanuunkaaga adoo hubinaya xogta koontooyinka iyo xiriirada inay kuxirantahay barnaamij kasta, ogeysiisyada isticmaaleyaasha iyo digniinta ayaa ah kuwo waqtigooda ku habboon, gacan-ka-bixintuna waa sax. Nikhil Hasija, agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkadda Azuqua
Azuqua ee shaqooyinka Guusha Macaamiilka waxaa ka mid ah:
Safarka macaamiisha: qabashada iyo diiwaangelinta heerarka guusha macmiilka iyo waxyaabaha ka reeban hirgelinta, korka, tababarka, iyo la-tashiga.
Isugeynta xiriir: meel dhexe u dhig xisaabta iyo xogta xiriirka dhammaan nidaamyada kaqeybgalka laga bilaabo taageerada illaa suuq-geynta bulshada internetka.
Kobcinta: la dhexgal ilaha xogta guusha macaamiisha dibadda sida FullContact si toos ah loogu daro xogta koontada iyo diiwaanka xiriirka.
Isgaarsiinta: la soco munaasabadaha guusha macmiilka ee muhiimka ah ama ficillada una dir digniino waqtiga ugu dhow ee tooska ah emayl, qoraal, ama fariin deg deg ah.
Abaabulka xogta: hubi in akoon cusub ama la cusbooneysiiyay iyo xogta xiriirka lala cusbooneysiiyo taageerada, la-talinta, tababarka, suuq-geynta, bulshada, iyo codsiyada kale.
Habaynta orchestration: la socodsii howlaha iyo arrimaha cusboonaysiinta barnaamijyadan.
Saxiix Maxkamad Bilaash ah oo Azuqua ah
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo Azuqua.
Tags: azuquabuluugCRMDatasilos dataxoogeysteXiriir buuxaaragtidaKate Legettxogta suuq geyntaiswaafajinta xogta suuq geyntais dhexgalka suuq geyntasuuqoNikhil HasijaiibinThomas EnochsShaqeyntazendesk
Nov 25, 2015 saacadu markay tahay 4:55 PM
Tani waa qoraal aad u cajaa'ib badan runtii. Waxaan qiyaasayaa inaad dadaal badan galisay soo saarista qoraalkan waxtar weyn ayayna ii leedahay aniga iyo dadka kale ee wax qora ee wax qora. Waad ku mahadsantahay wadaagida qoraal aad u fiican.